केही दिन अघि एक्कासी चिसो बढ्दा अब धुलिखेल मा हिउँ पर्छ बन्ने हल्ला चलेको थियो । म चाँहि मन मनै मख्ख थिँए, ओहो अब हिउँ परेको पनि देखिने भइयो ! तर हिउँ परेको अनि हिउँमा खेलेको देख्नु त सपना भइहाल्यो । त्यसमाथि धूलिखेल बाट उत्तर तिर देखिने हिमालहरु पनि काला देखिँदैछन् । साँच्चै भनेको हिमालहरु काला देखिँदैछन्, हिउँ नै छैन हिमाल मा । हिजो एकजना साथि ले चरिकोट दोलखा बाट फेसबुक मा लेखेकी थिइन्, गौरीशंकर पनि कालो देखिएको छ, के भा’को यस्तो, हिउँ नै छैन । मैले रिप्लाइ मा लेखेको थिँए, ग्लोबल वार्मिङ अनि क्लाइमेट चेन्ज ! सायद ग्लोबल वार्मिङ अनि क्लाइमेट चेन्ज ले गर्दा नै हिउँहरु हराउँदैछन्, हिमाल कालो देखिँदैछन् ।
एकाबिहानै उठेर झ्याल बाट बाहिर हेर्दा सबै तिर सेताम्मे देखिएको थियो । तुषारो (Dew) भन्ने थाहा हुँदा हुँदै ओहो, लौ हिउँ पर्‍यो कि क्या हो भन्दै, म तुषारो हेर्न तल झरेँ । तुषारो माथि हिँड्दा, झरम, झरम को आवाज आयो । सबैतिर सेताम्मे थियो, हिउँ नै परेको जस्तो, नभन्दै मेरो चप्पल पनि एकैछिन मा सेतो भयो । होस्टल को छाना माथि हेरेको त, हाम्रो पानी तताउने सोलार पनि सेतै रहेछ, म कराएँ ब्रो सोलार त सेतै छ, कोठाबाट साथि ले थप्यो, त्यही भएर त हात काट्ने पानी आ’को रहेछ नि एकाबिहानै बाथरुम मा । साथि ले कोठाबाटै सुझायो, स्कि खेल ब्रो । ल ठिक छ, भनेर म तुषारो मै चिप्लिन थालेँ, ओहो साह्रै रमाइलो पो हुने रहेछ, झन् हिउँ मै स्कि गर्दा त कति मज्जा हुन्थ्यो होला सोच्दैरहेँ । एकछिन मज्जा ले रमाइलो गरेँ एक्लै, केही फोटो नि खिँचे मोबाइलबाटै ! अनि फर्कने बेला पनि, चिप्लिदैँ फर्किँदा मज्जा ले लडियो धन्न हात टेक्न भ्याँए र केही भएन, हैन भने मेरो टाउको भित्ता मा मज्जा ले ठोकिन्थ्यो ! खैर, जेहोस्, धूलिखेल को तुषारो सबैलाई देखाउँदैछु है !
Eternal January 11, 2010 at 6:18 PM
Really Nice pictures....I wish to see snow fall...yo global warming ko chakkar le ni wakkai banaisakyo.....
feri bides tira chai gadi nai dubne snow fall hune re... :)
Pictures chai dherai ramro chan... :)
Dharmaraj January 11, 2010 at 7:08 PM
ओह... हो!!! तेसो भये ब्रो ले हिउ को मज्जा त तुसारो बाट पो लिएको रहेछ त , तर ब्रो हरु Unlucky नै हो है किनकि धुलिखेल मा हिउ परे त काठमाडौं का मान्छेहरु भुसुक्कै आएर हेर्थे होलानी अनी मेरो प्यारो धुलिखेल अलिक फोहोर हुने थियो होला तर पनि राम्रै हुने थियो किनकी माइली भाउजुको चिया पसल खुब चल्ने थियो होला तर हिउ परेनी जे परेनी मैले चाँही मेरो जन्म थालो धुलिखेल निकै Miss गर्ने थिए किन कि म अहिले यो हिउ नै हिउ ले ढाकेको नर्बे तिर पो छु यार।
ब्रो हरुहिउ नपाएर त्यता दिक्क मलाई भने यहाँ हिउ नै हिउ को चिन्ता उह्ह्ह्हु चिसो!!!!
Aakar January 11, 2010 at 8:13 PM
धर्मराज ब्रो ! त्यो हिउँ अलिकति ईमेल मा पोको पारेर यता धुलिखेल मा पठाइदिनु न हो ।
Dilip Acharya January 11, 2010 at 8:47 PM
ल राम्रै तुषारो परेको रहेछ त। हिउँ नभए पनि फोटो हेर्दा "हिउँ वा सो सरह" भन्दा भने फरक नपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई ।
Unknown January 12, 2010 at 2:37 AM
एकताका हिउँदमा भक्तपुरको सल्लाघारी क्षेत्रमा यस्तै टेक्दा चुरुम चुरुम बज्ने तुसारो देखेर म हिउँ यस्तै त होला नि भनेर मख्ख परेको थिएँ । खुब रमाएको पनि थिएँ । हुनपनि नेपालमा रहुञ्जेल हिउँको अनुहार देख्न पाएको थिईनं । आजभोलीभने धर्मराजजीलाई झैं मलाई पनि हिउँले साह्रै दिक्क बनाउँछ । तुसारोले छपक्क ढाकेका तस्विरहरु बाँड्नुभएकोमा धन्यवाद !